Ilkay Gundogan Oo Magacaabay Xiddiga Naqaska Ku Dhejiya Ee Uu Ka Nuuxsan Waayey Iyo Saddexda Weeraryahan Ee Ugu Fiican Dunida - GOOL24.NET
Ilkay Gundogan Oo Magacaabay Xiddiga Naqaska Ku Dhejiya Ee Uu Ka Nuuxsan Waayey Iyo Saddexda Weeraryahan Ee Ugu Fiican Dunida
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa magacaabay ciyaartoygii ugu adkaa ee uu abid ay ku kulmaan garoomada, xilli uu isku diyaarinayo ciyaarta adag ee Sabtida ay ku qaabbilayaan Chelsea.
Ilkay Gundogan oo ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayay barta Twitter-ka ayaa waxa uu qirtay inuu jiro hal ciyaartoy oo marka uu ka hor tago naqaska ku dhejiya, isla markaana ay ku adkaato sidii uu uga baxsan lahaa.
Kubbad-sameeyahan ayaa waxa uu Sabtida ka hor tegayaa isla ciyaartoyga uu sidan uga cabanayo, waana kubbad-burburiyaha Chelsea ee N’Golo Kante.
“Ciyaartoygii iigu adkaa ee aan abid ka hor tago waa N’Golo Kante. Waa ciyaartoy xoog badan, xaddiga shaqada uu geliyo ciyaarta ayaa ah wax aan la rumaysankarayn…” Ayuu yidhi Ilkay Gundogan.
Su’aalo badan oo ay weydiiyeen taageereyaasha Manchester City ayuu ka jawaabay Gundogan, waxaana ka mid ahayd waxa uu qorshihiisu yahay marka uu ka fadhiisto kubadda cagta iyo haddii uu falsafadda macallinimada ka dhaxlayo Pep Guardiola oo hadda tababarihiisa ah iyo Jurgen Klopp oo kusoo layliyey Borussia Dortmund.
“Haa, waxay iigu jirtaa qorsheyaasha, waxaanan hadda wadaa inaan helo liisanka tababarenimada. Sharaf ayay ii tahay in aan awooday ama aan wali la shaqaynayo tababareyaal sare, sida Pep Guardiola, Jurgen Klopp, ThomasTuchel, Hansi Flick iyo Jogi Low.”
Waxa kale oo uu Ilkay Gundogan magacaabay saddexda weeraryahan ee ugu wanaagsan dunida waqtigan, kuwaas oo uu u doortay Robert Lewandowski, Karim Benzema iyo Mohamed Salah.